Ny fanavaozana ao XMailer 3.0. Ahoana no mba hitsambikina-manomboka ny gazety - Blog XMailer.
Ny fanavaozana ao XMailer 3.0.
Isika hampivelatra ny fitaovana rehetra ho mailaka newsletters XMailer. Izay manao ny fomba tsy miangatra eo amin'ny ny famandrihana ny mailaka database, ary mamela anao mba handefa newsletters... na base de données ny adiresy.
Izany rehetra izany dia miankina amin'ny mpampiasa.
Eo amin'ny fampiharana, dia afaka ny mamaritra ny toe-javatra izay hamela anao mba hanitsy ny tena an-kolaka ny toe-javatra.
XMailer hafa noho ny mpifaninana ny, ny zava-misy fa izy dia teraka tao amin'ny tontolo izay ny famonoana ny mailaka newsletters dia professional andraikitry ny mpandraharaha.
Noho izany, ny zava-tsarotra rehetra dia fantatra amin'ny anarana sy ny isan ny vaovao dikan-XMailer nanapa-kevitra vaovao be pitsiny ao amin'ny gazety.
Ao amin'ny fahatelo dikan -, tanteraka nohavaozina XMailer 3.0 dia nanapa-kevitra ny hanova ny fehezan-dalàna rehetra avy rangotra, ratra kely, ary maka ny fomba fanao tsara indrindra nandritra ny taona maro lasa tany amin'ny endriny vaovao.
Nanampy miasa izay efa ela no ampiasaina sy ny mandroso eo amin'ny zava-miafina laboratoara.
Ao amin'ny fahatelo dikan-dia ampiharina endri-javatra vaovao maro:
Download adiresin'ny banky angona
Download vonona-to-mampiasa ny kaonty
Ny validation asa kaonty sy ny adiresy
Ny fomba fandefasana mailaka
Ao anatin'ity lahatsary manaraka ity dia nampiseho ny fomba haingana manomboka ny gazety vaovao amin'ny fampiasana ny farany-miasa XMailer 3.0
Isika dia mbola hamoaka ny soso-kevitra ho an'ny fandefasana mahomby newsletters. Enga anie, ireo soso-kevitra hanampy Anao fampiharana mahomby mailing.
Ny lohahevitry ny lahatsoratra manaraka - ao amin'ny tolotra Fanohanana ara-teknika.
Ny fanavaozana ao XMailer 3.0. Ny fomba fandefasana mailaka? Ответ здесь.
Ny fanavaozana ao XMailer 3.0. Ny fomba fandefasana mailaka? Ответ здесь